Nzira Detective Water nemhute Transmittance Kurapwa Packaging - China Wellform Packaging Group
Nzira rokuongorora mvura mhute permeability zvokurapa mumasaga
Medical masaga aro chiedza uremu, mukuru simba, chisimbiso zvakanaka uye kumanikidzwa nezvimwe zvakanaka, iri zvishoma nezvishoma kutsiva zvokurapa mabhotoro girazi, iri zvinowanzoshandiswa nemumuromo zvikukutu mushonga uye mvura mushonga kavha muchikwata. Water mhute chinhu chinokosha kukanganisa unhu uye kuchengeteka zvinodhaka, kuitira kudzivisa matambudziko mvura mhute nezvinodhaka, zvokurapa zvikwama vanofanira chakanakisisa nemishonga kuti mwando kuitira chigadzirwa unhu uye kuchengeteka. In neKwayedza, mvura nemhute permeability bvunzo hurongwa zvokurapa zvikwama iri muchidimbu akasuma akabatana Labthink kwakaita PERME BMI W3 / 330 mvura mhute yedzimudzangara zvazvingava bvunzo hurongwa.
Water mhute kutapukirwa mwero ndiko kunonyanya rinoreva vanachiremba bhegi iri voga mvura mhute, mwando kuramba basa zvakananga zvarinoita kunaka zvinodhaka ari pasherefu upenyu kwenhumbi, asi chinhu chinokosha chiri kuongorora pasherufu upenyu. Mushure rokuongorora anogona kubata mvura mhute vasanonoka uye panowanikwa zvinodhaka nyorova mubvunzo zvavhuvha.
Labthink W3 / 330 mvura mhute permeability bvunzo hurongwa, electrolytic Switch bvunzo musimboti, mudziyo anoshandisa matatu bvunzo mukamuri revatema block patented zvigadzirwa, kudzora kombiyuta, zvakazara kushingaira bvunzo, clamping ivhu, tinya kuedza kuti Unogona kutanga kuedza, tora tanga kugumisa mwando, tembiricha, kuyerera mwero uye vamwe zvebasa kudzorwa, asi experimental kuvakwa danho kuziva uye nyaya mashoko. The Chishandiso anogonawo batanidza pfumbamwe Satellite michina, nomuedzo ivhu 30 pakupedzisira, zvose mukushanda ukuru kushandisa michina, bvunzo simba, Kuongorora chisarudzo rokuongorora nemiganhu zvasvika international yepamusoro sandara, uye zvinangwa zhinji Uyewo yakaramba kutungamirira .
The experimental zvichiitika sezvinotevera: yaivapo zvakaipa mhoni yokuenzanisira anoiswa mukati bvunzo mukamuri, uye senitrogen zviri zvakafanira mwando rinoshanda riri kunze mhoni rongedza. Mukuru kuchena senitrogen rinoshanda mukati mhoni Pack nokuda paine hunyoro gradient, The mhute mamorekuru nomunyika firimu kubva kunze mhoni kusvikira mukati venzvimbo kuchena senitrogen, akatakurwa yezviri senitrogen kusvika Switch, kubudikidza Switch kuyera mvura mhute wevasungwa pachisara uye ipapo ngaaverenge mvura mhute permeability nezvimwe parameters kuna The kurwisa rebvunzo mharidzo yakanga yaizoongororwa.
Zvechokwadi, mukuita zvokurapa kavha masaga mvura mhute kuburikidza kubaya pashure achipfuura, asi vanoda vamwe vanonangwa akadai mwando nemishonga, Simbiso, etc. kudzora, nechokwadi unhu kwenhumbi panguva pasherufu upenyu.
Post nguva: Jun-13-2018